बारम्बार किन बढाइन्छ पेट्रोल र डिजेलको मूल्य ?
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल मट्टीतेलको मूल्यमा वृद्धि गरेको छ । निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतका अनुसार मट्टीतेल, डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर समान दुई–दुई रुपैयाँ मूल्य बढाइएको हो । स्वचालित प्रणाली अनुसार मूल्य वृद्धि गरिएपछि अब पेट्रोलको मूल्य आजै राति १२ बजेदेखि प्रतिलिटर एक सय
आर्थिक सर्वेक्षण अगामी वैशाख १ देखि सुरु हुने
काठमाडौँ । । राष्ट्रिय आर्थिक सर्वेक्षण अगामी वैशाख १ गतेदेखि सुरु हुने भएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सञ्चालन गर्ने सो सर्वेक्षणको मुख्य ध्येय केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहको विकास योजना तर्जुमा तथा नीति तयार गर्न आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क संकलन गर्नुरहेको छ । यसका लागि विभागले ७७ जिल्लामा आर्थिक
एनएमबी बैंक ‘बैंक अफ दि इयर २०१७’ बाट सम्मानित
एनएमबी बैंक ‘बैंक अफ दी इयर २०१७ बाट’ सम्मानित भएको छ । बेलायतको फाइनान्सियल टाइम्सले हरेक वर्ष प्रदान गर्ने यस उपाधी यस वर्ष एनएमबीले पाएको हो । बैंकको वित्तीय अवस्था र वित्तीय विवरणबाट देखिने वित्तीय जोखिम न्युनिकरण क्षमताको आधारमा मात्र नभई वित्तीय समावेशीकरण, मल्टि च्यानल बैंकिङ लगायतको आधारमा
कैलाश न्यौपाने,प्रबन्ध निर्देशक Creast Education कन्सलटेन्सी नेपालीयुवा युरोप अमेरिका जाने भनेपछि मरिहत्य नै गर्छन । कति पढनका लागि त कति राम्रो दाम कमाउने दाउमा विदेश छिर्न खोज्छन र उतै सानोतिनो व्यवसाय गर्ने र घरजम गर्ने धेरै नै छन् । अपवाद कैलाश न्यौपाने त्यस्ता युवा परेनन् जो ६/७ वर्ष वेलायत बसेर (Master’s Degree) गरेर
नेपाल टेलिकमका सेवामा थप ३ महिना छुट, डाटादेखि भ्वाइस प्याकसम्म
काठमाडौं, २२ कात्तिक । नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई समय/समयमा उपलब्ध गराएका विभिन्न प्रमोसनल अफरहरुलाई थप तीन महिनाका लागि निरन्तरता दिएको छ । उपभोक्ताहरुले अत्यधिक रुपमा रुचाएकाले यी अफरलाई निरन्तरता दिइएको हो । कम्पनीको प्रमोसनल अफर अन्तर्गत उपलब्ध गराइएको यो अफर आगामी माघ २४ गतेसम्म कायम रहने टेलिकमले
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले नेपालीहरुको महान चाड पर्वहरुको उपलक्ष्यमा विगत वर्षहरुमा जस्तै यस वर्ष पनि कम्पनीका सेवाहरुमा विभिन्न प्रकारका छुट तथा अफर उपलब्ध गराएको छ । कम्पनीले तिहार तथा छठको अवसरमा कात्तिक १ देखि १५ गतेसम्म प्रयोग गर्न सकिने गरी विभिन्न अफर उपलब्ध गराएको छ । १. रिचार्जमा बोनस : जिएसएम
बैंकिङ खबर / मानिसहरुमा फाइनान्स कम्पनी र सहकारी संस्था एउटै हुन् भन्ने भ्रम रहेको छ । कतिपय सहकारीका कर्मचारीहरुले आफूहरु फाइनान्समा काम गर्ने भन्ने गरेको सुनिन्छ । यद्यपि, सहकारी संस्था र फाइनान्स कम्पनीहरु एउटै हैनन् । यीनीहरुको काम, कर्तव्य, अधिकार, उद्देश्य, नियामक निकाय लगायत धेरै पक्षहरु एकअर्कासँग
कसले भर्न पाउँछन् आजबाट खुलेको बैंकको १०० रुपैंया अंकित २६ करोडभन्दा बढिको सेयर ?
काठमाडौ । नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंकको १२० प्रतिशत हकप्रद बिहीबारदेखि खुलेको छ । बैंकले असोज २६ गते देखि १ः१.२ अनुपातमा १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यको २६ लाख ४३ हजार ५३८.८० कित्ता अर्थात् २६ करोड ४३ लाख रुपैंया बराबरको हकप्रद बिक्री खुला गरेको हो । सो हकप्रद सेयर कात्तिक २९ गतेसम्म भर्न पाइनेछ । यसमा एनआइबीएल
बीमाका शेयरधनीलाई खुसीको खबर, ४२ प्रतिशत बोनस
काठमाडौ २७, असोज । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ४२ दशमलव ११ प्रतिशत बोनस शेयरको प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले कात्तिक १७ गते जीवन बीमा तर्फको ३० औं वार्षिक साधारण सभाबाट उक्त प्रस्ताव पारित गर्ने बताएको छ । आर्थिक वर्ष ०६३/ ६४ सम्म कायम रू.१२ करोड ९३ लाख चुक्तापूँजीको ४२ दशमलव ११ प्रतिशतका दरले हुन आउने रू. ५ करोड
एनआइसि एसिया बैंकको ३० करोड ह्याक : राष्ट्र बैंकले भन्यो- कारोबार नगर !
काठमाडौं, असोज ६ । विदेशी ह्याकरहरुले नेपालका वाणिज्य बैंकहरुलाई निसाना बनाउन थालेको समाचार बाहिर आइरहेको बेला मुलुककै प्रतिष्ठित बैंक एनआईसी एसियाको ३० करोड रुपैयाँ ह्याक गरेको रहस्य बाहिर आएको छ । लक्ष्मी पूजाको दिन बेलुकि बैंक बन्द गर्दा मुलुकभरकै शाखाको अवस्था दुरुस्त भएको रिपोर्ट सबै शाखा कार्यालयले
बैंकको भन्दा कम ब्याजमा राष्ट्र बैंकको बचतपत्र बिक्रीमा ,८.५% ब्याज
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले साढे ८ प्रतिशत ब्याज दरको नागरिक बचतपत्र निस्कासन गर्ने भएको छ। एक बर्षे मुद्दतिमै बैंकहरुले १२ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले पाँच बर्षे अवधिको बचतपत्रमा न्यून ब्याज राखेर निस्कासन गर्न लागेको हो। कात्तिक १२ देखि मंसिर १ गतेसम्म बचतपत्र खरीदका लागि आवेदन
कति आउँदैछन् विदेशी पर्यटक?
भूकम्पपछि विदेशी पर्यटक अगमन स्वात्तै घट्ने आशंका थियो तर त्यस्तो भएन। विदेशी सञ्चारमाध्यममा नेपालका पर्यटकीय गन्तब्यबारे निरन्तर रुपमा सकारात्मक प्रचारप्रसार हुनाले पर्यटकको संख्या वृद्धि भएको हो। अध्यागमन विभागका अनुसार यो वर्षको आठ महिनामा पाँच लाख ६६ हजार दुई सय २१ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्।
धितोपत्र बजार सोमबार दोहोरो अंकले बढेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार बजार ४६.६२ अंकले बढेको छ। दशैँपछि उच्च बिन्दुले बजार बढेको आज पहिलो पटक हो। दोहोरो अंकले बजार बढ्दा नेप्से परिसूचक एक हजार ५६४ बिन्दुमा पुगेको छ। बजारमा लगानीकर्ता सम्हालिएर लगानी गर्न थालेको तथा राजनीतिकरुपमा पनि निर्वाचनको
गोल्छा अर्गनाइजेसनको भगिनी संस्था हिम इलेक्ट्रोनिक्सले नयाँ एलईडी बल्ब सार्वजनिक गरेको छ। हिमस्टार एलईडी बल्ब नेपालको पहिलो अन्तराष्ट्रिय स्तरको सी ई सर्टिफाईड एलईडी बल्ब भएको जनाउँदै हिम इलेक्ट्रोनिक्सले यो नेपालमा सबैभन्दा धेरै बिक्रि हुने एलईडी बल्ब पनि रहेको दावी गरेको छ। नयाँ एलईडी बल्बमा १००
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा जिल्लाबाट करिब रु १४ करोड बराबरको तरकारी बिक्री गरिएको छ। बन्दागोभी, काउली, मुला, गोलभेँडा, रायो, बोडी, मटरलगायत तरकारी बिक्री गरिएको हो। सो आवमा किसानले कुल २७ हजार १३९ मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन गरेका जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत रोहिणीराज घिमिरेले
नेपाल टेलिकम र एनसेलले सरकारलाई रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र अग्रिम फ्रिक्वेन्सी लगायतका शीर्षकमा ७ अर्ब ७६ करोड १ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कानुनी प्रावधान अनुसार सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार
तिहार नजिकिँदै गर्दा नेपालमा सुनचाँदीको माग बढेको छ। लक्ष्मी पूजाको दिन घरमा सुन-चाँदीको सामग्री भित्र्याउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ धेरै नेपालीले तिहारको समयमा सुनचाँदी खरिद गर्ने गरेका छन्। त्यसैले पनि सुनचाँदीको माग बढेको हो। यद्यपि सुनचाँदीको मूल्य भने केही घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी
तिहारको समयमा जिल्लामा ढाकाको व्यापार ह्वात्तै बढेको छ। ढाकाबाट बनेको टोपी, मखलर, कुर्तासुरुवाल, सारी, ब्लाउज, पछ्यौरा, चौबन्दी, सर्ट लगायतका कपडाको व्यापार बढेको हो। अरू समयमा मुस्किलले महिनामा रु ५० हजारदेखि रु एक लाखसम्म ढाकाका सामान बिक्री हुने भए पनि तिहारको समयमा दैनिक रु ५० हजारको हाराहारीमा सामान
ठमेल आजदेखि ‘भेहिकल फ्रि जोन’
पर्यटकीयस्थल ठमेल आइतबारदेखि ‘भेहिकल फ्रि जोन’ घोषणा भएको छ। पर्यटकलाई घुमफिरका लागि सहज बनाउने उद्देश्यकासाथ काठमाडौं महानगरपालिका, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, ठमेल पर्यटन विकास परिषद् लगायतको सहकार्यमा ठमेललाई 'वाकिङ स्ट्रिट' बनाउन लागेको हो। ठमेलको नरसिंहचोकबाट पश्चिम, जेपी मोडबाट